आफैले ‘लोगो’ थुतेका सांसदमाथिको ‘भरोसा’ कति नैतिक ? « Janata Samachar
काठमाडौं । हुन त राजनीतिलाई विचित्रको खेल त्यसै कहाँ भनिएको हो र ? बेला बेला राजनीतिकर्मीहरुले गर्ने व्यक्तिगत र स्वार्थ प्रेरित निर्णयले स्वभाविक गतिमा अघि बढ्नुपर्ने राजनीतिको लयलाई नै मोडिदिँदो रहेछ । त्यस्तै भयो, नेपालको इतिहासमा राजा महेन्द्रले गरेको ०१७ सालको ‘कू’ कै झल्को दिने गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुष ५ मा गरेको निर्वाचित संसदको विघटन नेपाली राजनीतिका लागि स्वभाविक दिशा मोड्ने कृत्रिम प्रयास ।
०१७ सालको ‘कू’ जस्तो लामो आयू नबाँचेपनि पुष ५ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट राजनीतिको प्राकृतिक दिशा मोड्न राजनीतिज्ञले स्वार्थवश के र कतिसम्म गर्न सक्छन् ? भन्ने दुनियाँका सामु स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकको राजनीतिमा क्रियाशिलमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा चरम अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्री ओलीको समूहबाहेकको सिंगो देशले संसद विघटनलाई ‘प्रतिगमनकारी कदम’ भन्यो । निर्वाचित संसदमा आफ्नो विपक्षमा स्पष्ट बहुमत पुगेको र कुर्सी जोगाउन कठिन हुने भएपछि पदको रक्षाको लागि ओलीले गरेको संसद विघटनलाई शक्तिशाली सर्वोच्च अदालतले पनि असंवैधानिक भन्यो र बदर गरिदियो ।
पार्टीभित्र ओलीमा देखिएको विधि नमान्ने, बैठक नबस्ने, नेताहरुको अपमान गर्ने र आफूबाहेक अरु कसैलाई नगन्ने र निषेध गर्ने प्रवृत्ति जसरी अल्पमतमा पर्यो, त्यसैगरी अदालतको फैसलाले पनि लामो समय छलकपटपूर्ण राजनीतिको सहारा लिँदै अघि बढेका ओलीको नैतिक पराजय भयो । तर आज पार्टीमा राजनीतिक हार हुँदा कुर्सी जोगाउने उपाय खोज्दै पार्टी विभाजन र संसद विघटन गरेर हिंडेका ओली पार्टी बाहिरको पराजय पनि स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । फेरि पनि ओलीले अधिक व्यक्तिवादी बन्दा पार्टी विभाजन भएको, कुर्सी जोगाउन खोज्दा संसद विघटन गरेकोे र दुवैमा पराजय भोगेको स्वीकार गर्दै राजनीतिको अनैतिक बाटो छाड्ने संभावना असाध्यै न्यून छ ।
पार्टी बैठकमा कुर्सी भाँचिदिन्छु भनेका र भाँचेर व्यवहारमै पनि देखाइदिएका ओलीले आज फेरि आफैले घाँटी निमोठेको संसदलाई अत्याधिक भरोसा गर्न थालेका छन् । सोमबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्ने बताएसँगै अब उनले आफ्नो बाँकी राजनीतिको रक्षाको लागि पार्टीका सांसदहरुमा भर गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन् । तर प्रश्न स्वभाविक उठ्छ, के ओलीका लागि आफैले संसद विघटन गरेर लोगो थुतेका सांसदहरुमाथिको भरोसा नैतिक छ ?
उसो त ओलीले सांसदहरुमाथि केवल भरोसा मात्रै गरेका छैनन्, उनको ‘भन्ने एक गर्ने अर्कै’ पुरानै संस्कृति समेत दोहोर्याउन थालेका छन् । केही दिन अघि संसद पुनर्स्थापना भए ‘सांसदको किनबेच’ शुरु हुने अभिव्यक्ति दिएका ओलीको समूह नै यो प्रक्रियामा दुई बित्ता उफ्रेर लागेको सार्वजनिक हुन थालेको छ । ओली समूह पार्टीका सांसदहरुलाई पैसा र पद दुवै बिनियोजन गरेर भएपनि आफ्नो पक्षमा तान्न कसरी लागिरहेको छ ? भन्ने तथ्य थाह पाउन नेकपाका केही सांसदलाई सम्पर्क गरे मात्र पनि थाह भइहाल्छ ।
यसरी पार्टी राजनीतिमा पराजित ओलीले सर्वोच्चको फैसला पछि पनि नैतिकताको राजनीतिमा हिंड्न नखोज्नु बिडम्बनाको विषय बनेको छ । उनले आफ्ना अभिव्यक्ति, राजनीतिक शैली र व्यवहारहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्रै बदनाम गराइरहेका छैनन्, सिंगो राजनीति प्रति नै वितृष्णा बढाइरहेका छन् ।
उसो त कतिपयले भन्ने गरेको तर ओली व्यवहारबाट सम्भव नदेखिने नेकपाको फेरि एक ढिक्का बन्ने सम्भावना ओलीले नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने असम्भव पनि हुन्न । तर यसका लागि ओलीले पार्टी र संवैधानिक रुपमा भएको आफ्नो पराजय स्वीकार्दै विधिसम्मत अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ । जसको सिधा र एउटै विकल्प हो, पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा । यसरी नैतिकताको राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नु ओलीका लागि मात्रै होइन देशका लागि पनि उक्तिकै उपलब्धिपूर्ण हुन सक्छ । र आफैले लोगो थुतेका सांसदहरुले फेरि विश्वास गर्ने दिन पनि फर्किन सक्छन् ।